Ezakamuva Archives - Page 2 of 555 - Impempe
June 29, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane Sekusungulwe umjaho wokusubatha okuzohlonishwa ngawo inkakha yomculo kuleli eyayidume umhlaba wonke uJoseph Shabalala owayehola iLadysmith Black Mambazo. Lo mjaho ozobizwa ngeJoseph Shabalala Marathon kuhloswe ngawo ukugqugquzela igenge esencane ngokuthi ingalilahli ithemba lempilo engcono. […]
“Bake bathusana naye kwasweleka ozogadla kuqala ngesikhathi,” kubeka lo mthombo oveze nokunye lo mqeqeshi akwenzayo okungalungile
UKerr akuyena ovikise iSwallows izembe, kusho isikhulu
“Lo mqeqeshi ubenemidlalo engu-18. Kule midlalo engu-18 ngeke uthi lowo muntu utakule iqembu ezembeni,” kusho uKerr
Leave a commentEzakamuva, iDStv Premiership, iGladAfrica Championship
IPirates seyidalule abanye abadlali ababolekiswayo
June 28, 2022 Impempe.com
Sbongs Gumbi I-Orlando Pirates seyikhiphe uhlu lwabanye abadlali abazobe bengekho eqenjini layo ngesizini ezayo okukhona kubo umgadli osemncane uBoitumelo Radiopane. Ngokwesitatimende esikhishwe yiPirates ngoLwesibili ntambama, uRadiopane uzogijima kwiCape Town Spurs ngesizini ezayo lapho ezobe ebolekiswe […]
Odedelwe yiPirates uzimisele ngokukhuphula iSekhukhune
Sihle Ndlovu UTshegofatso Mabasa, ochithwe yi-Orlando Pirates, uthi uzosebenza kanzima ukusiza iqembu lakhe elisha iSekhukhune United. Lo mdlali ungomunye walabo abethulwe yileli qembu ngoLwesibili njengoba lizama ukulungiselela isizini entsha. Abanye abethulwe noMabasa uDewin Farmer, u-Abdenigo […]